Injector Needleless Best - Shiinaha Shandong Zhongbaokang Medical
Waqti Delivery: In 2 toddobaad
Awoodda Supply: 1,000 kombuyuutar oo bil kasta
ZBK Injector loo baahnayn ka kooban yahay laba qaybood
1, qayb waxaa ka mid ah hal isticmaal adabtarada buuxintii oo Nadiif ah iyo isticmaalka hal tuuro oo Nadiif ah 0.3 ml qalin silingaha baahnayn (dhalada). Waxay waa ubucda iyo sal magacaabayo of Injector ku Baahnayn.
2, qayb waxaa ka mid ah Injector iyo Warbixannada station iyo bixisaa budo la isku duro
Qaab dhismeedka qayb kasta
1.sterile hal isticmaal buuxinta adabtarada: Cap, haystaha irbad iyo irbad tubbada.
2.Disposable hal isticmaalka silingaha loo baahnayn oo Nadiif ah: foosto, Cabbeeyaha iyo bar muhiimka ah.
3.Injector: jirka Injector, qufulka ammaan ah oo ka baxsan kaatunkiisii, qufulka ammaan giraanta hoose iyo farganka.
Idaacadda 4.Reset: cadaadis cover sare, resetting bar, resetting heysta saldhiga.
Product mabda'a hawl-
Injector Baahnayn waa qalab la isku duro by cadaadis ah oo aadan u baahnayn irbad lagu jiro Irbadaha ah. Iyada oo la adeegsanayo guga gaar ah super xoog leh si ay u sameeyaan cadaadis sare, cadaadis this, daawada dareeraha gudbi doono god aad u khafiif ah oo ay soo saaraan durdur dareere ah oo dhex gelin maqaarka iyo buufin si lakabka subcutaneous by silingaha irbadda.
1.Eliminate xanuunka isku duro.
dhacdooyinka duridda 2.Eliminate sababa irbad.
4.No nabarrada, barar, burburin iyo darayaan.
6.No baahan dhaqo oo si sahlan ay u maareeyaan, size yar yar oo si sahlan ay u fuliyaan; bukaanka amblyopic sidoo kale u isticmaali kartaa.
isticmaalka Product hordhaca
1.Prepare Injector ah
2.Fill siriinjyada ah
hubinta tayada Product
Shirkadda Our ayaa maray Iso9001, ISO013485 shahaadada tayada caalamiga ah iyo ISO14001 shahaadada deegaanka caalamiga ah.
Shirkadda ayaa jireed, kiimikada, laboratories noolaha iyo qalabka jeermiska oo baaxad weyn si loo hubiyo in waxyaabaha ay yihiin pyrogen-free, sun-free. Waxaan sidoo kale waxay leeyihiin qol muunad si loo hubiyo tayada sheyga.
Service oo go'an
The Baahnayn Injector macmalay by Shandong Zhongbaokang caafimaad fulisaa Co., Ltd si adag loo baaro, la qabsato oo hubiyaa si loo hubiyo in tayada wax soo saarka wanaagsan ee. Haddii ay jiraan qaar ka mid ah failure inta lagu jiro isticmaalka ama dhibaato tayo leh, fadlan soo wac waaxda suuq geynta iyo waxay u baahan yihiin dayactir, No. telefoonka waa + 86-0533-8688533.
yabooha shir quduus ah, our Injector iyo Dib u celi saldhigga leeyihiin hal sano markii damaanad tan iyo taariikhda wax iibsiga iyo FillingAdaptor iyo Baahnayn siriinjyada (dhalada) waxay leeyihiin laba sano damaanad tan iyo taariikhda jeermiska ah.
Previous: Set galiyey Iyadoo Filter Cayiman Oo One Spike
Next: adabtarada buuxinta
Medical Baahnayn Injector
Mesotherapy duritaanka Gun
Irbad Free Injector
Injector Needleless Waayo Insulin